Umkhiqizi kanye neFektri Engcono Kakhulu Yokushisa kagesi I-Bohua
Isiteshi sokugeza iso locingo
65L AMANZI AMANZI AMAHLE ...
inhlanganisela yokugeza neso / ...
Isiteshi esibanzi sokugeza iso
Idivayisi yokuwasha ukushisa kagesi ilungele ama-degree angama-0 asenyakatho ngaphansi kokusetshenziswa kwendawo. Ibuye ilungele ukusetshenziswa ezindaweni lapho izinga lokushisa liphakeme kune -45 ℃. Amandla webhande lokulandela ngogesi yi-6 M * 48W / M. Ukulawula okuzenzakalelayo kwe-thermostatic kwendawo yomngane. Kukhona isilawuli sokushisa ukulawula amandla okushisa ebhande lokushisa ukuqinisekisa ukushisa kwamanzi. Izinga lokuqinisekisa ukuqhuma: ExdIICT4, ukuvikelwa kwe-IP65. Ibhokisi lokuhlangana kwamandla kagesi lebhande lokulandela ugesi lihlelwe ngokwehlukana nebhokisi lokuhlangana lokushisa lokushisa. Ubukhulu besendlalelo sokuvikela indawo eshisayo ngu-30MM, futhi okokufaka kungumgogodla welangabi ongaguquki. Amandla: AC220V / 1PH / 50Hz.
okuluhlaza okwe-ABS ukumelana nokushisa okuphezulu kwama-degree angama-200, isakhiwo esikhiphekayo, esilungele ukunakekelwa kamuva.
Itheku Amanzi kanye esidayisa iso washer:
HG / T20615 flange uxhumano. Amasayizi wokuxhuma ayi-1-1 / 2 DN40.
I-eyewash elbow tee yizingxenye ezijwayelekile zikazwelonke, azikaze zivimbeke.
Phezulu nangaphansi anezicucu ezi-2 zebhola le-valve, angavikela izikhathi ezingama-20,000 zokuvuza kwamanzi. Ekupheleni kokusetshenziswa, vala i-valve yebhola bese ukhipha amanzi ngaphakathi kwendololwane ye-eyewash, uqinisekise ukuthi sekukhishwe ngokuphelele kungakapheli imizuzu eyi-12.
I-eyewash horn bay yokuguquguquka kwamazwe amabili, njengoba ufuna ukulungisa usayizi wokugeleza kwamanzi.
Xhuma emanzini okuphuza okuphuza. Ingcindezi yamanzi ingu-0.25MPa
Futha ukugeleza kwamanzi: ≥120L / MIN
Ukugeleza kwamanzi kwe-eyewash / ubuso L12L / MIN
Isikhathi sokuqhuma ≥ imizuzu engu-15.
I-BH30-1062C: kusuka kuphuzi oluyisisekelo kuya ku-olintshi, kuyilapho umcengezi wokugeza nesitsha sebhlo sithuthukela ezingxenyeni zethusi ezifakwe
I-BH30-1062T: Idivayisi yokugeza iso ngomlomo kabili iba yidivayisi yokugeza umlomo ngomlomo owodwa
BH30-1062L: Kusukela ophuzi wemodeli eyisisekelo kuya kokuluhlaza
0206-1062: Izindlu zithuthukiselwe ezindlini zensimbi engagqwali
I-BH30-1062 (mpo): kusuka ohlotsheni oluyisisekelo lwenhlanganisela ku-eyewash mpo, ukukhanselwa kwengxenye yokugeza
Langaphambilini Kungcwatshwe i-double rod eye washer
Olandelayo: Ukushisa kagesi umshini wokuhlanza iso
Ukushisa Ukulandela Umshini Wokushisa kagesi
Umkhiqizi Wokushisa Wokushisa kagesi